အပေါ် Posted ဇူလိုင်လ 27, 2017 စာရေးသူ အင်ဒရူး ဟာ Off comments စိတ်လှုပ်ရှားစရာသတင်း! အောက်ဖော်ပြပါ VIG မှ Live Dealer ဂိမ်းများကိုယခု Spartan Slots, Black Diamond and Box 24 တွင်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ရနိုင်သည်။
အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ Mobile ကို Live! - Black Diamond, Spartan Slots, Box 24
ဤရွေ့ကားအတွင်းမည်သည့်ထုတ်ကုန်မှာမိုဘိုင်းပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်ရေးဂိမ်းများဖြစ်ကြသည် Deckmedia!
'Purrfect အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ' - မကြာမီလာမည် - Slotocash, Uptown Aces, Fair Go
RTG သည် 'Purrfect Pets' အသစ်ဖြစ်သော Slotocash၊ Uptown Aces နှင့် Fair Go Casino သို့လာမည့် ၅ ရက် Reel Video Slot အသစ်ကိုမေလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၇ တွင်ဖြန့်ချိမည်။
Real Time Gaming မှ ၂၅ လိုင်းအသစ် Purrfect Pets တွင်ပြသထားသည့်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောတိရစ္ဆာန်များသည်ကြောင်ချစ်သူများနှင့်ခွေးချစ်သူများကိုချစ်ကြလိမ့်မည်!
တောရိုင်းပါဝင်သည့်ဆုများအားလုံးသည်သုံးလတာကာလအတွင်း Cat Wilds ဆု (၁၀) ခု၊ ဖြန့်ကျက်ထားသည့်ခွေးသုံးကောင်သို့မဟုတ်ဆု ၁၀ ခုနှင့်အခမဲ့ဆု ၁၀ ခုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ဒီအင်္ဂါရပ်စဉ်အတွင်း Dogs အားလုံးသည် Cat Wilds အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
ကျပန်းဖြစ်ပေါ်စေသောစွမ်းဆောင်ချက်သည်ပုံမှန်ဂိမ်းလည်ပတ်မှု၏အဆုံးမှာ Doggy Dollars၊ Wild Cat သို့မဟုတ် Random Riches Feature တို့ကိုလည်းချီးမြှင့်နိုင်သည်။
အသစ်သော AU ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ - စိန်အနက်ရောင်၊ သေတ္တာ ၂၄၊ ကန္တာရညများ
ယခုအပတ်တွင်ကျွနု်ပ်ရုံးနောက်သို့ AU New Landing Pages (၃) ခုထည့်သွင်းထားပါသည်။
သင်ဤ link များကိုဤစာမျက်နှာများမှရယူနိုင်သည်။
Links များကိုခြေရာခံ> အသစ်> Affiliate Program အသစ်ဖန်တီးပါ။ ပြိုင်ဘက်> အရောင်းမြှင့်တင်ရေး: Desert Nights AU $ 10 FREE> Name Campaign> Create
Links များကိုခြေရာခံ> အသစ်> Affiliate Program အသစ်ဖန်တီးပါ။ မြှင့်တင်ရေး: Black Diamond AU Pokies> အမည်ကင်ပိန်း> ဖန်တီး
Links များကိုခြေရာခံ> အသစ်> Affiliate Program အသစ်ဖန်တီးပါ။ မြှင့်တင်ရေး: Box 24 AU Pokies> အမည်ကင်ပိန်း> ဖန်တီး
လကုန်အခမဲ့လှည့်ဖျား - Slotocash, Uptown Aces, Fair Go
အခမဲ့လှည့်ဖျားများနှင့်အတူ Slotocash, Uptown Aces, Fair Go နှင့် Red Stag တွင်Aprilပြီလကိုနှုတ်ဆက်ပါ။
slotocash - 25 အခမဲ့လှည့်ဖျား
စတင်ရက်စွဲ: 04/29/2017 00:00 EST
အဆုံးနေ့စွဲ: 04/29/2017 23:59 EST
မြို့ပြ Aces - ၂၅ ခုအခမဲ့လည်ပတ်မှု
စတင်ရက်စွဲ: 04/30/2017 00:00 EST
အဆုံးနေ့စွဲ: 04/30/2017 23:59 EST
Fair Go ကာစီနို - အခမဲ့ SPINS ၂၀
ကူပွန် Code ကို: BUBBLE-20
စတင်ရက်စွဲ: 04/27/2017 00:00 EST
ဂိမ်း: Bubble Bubble
Red Stag - ၃၇ ခုအခမဲ့လှည့်ဖျား
အဆုံးနေ့စွဲ: 05/08/2017 23:59 EST
400% $ 4000 အထိကြိုဆိုပါတယ်
Fair Go အသစ်ပြောင်းခြင်းများ
ယခုအပတ် Fair Go Mobile (Slotocash နှင့် Uptown Aces တို့တွင်) Pokies ၅ ခုထပ်ထည့်သည်။
ဝိဇ္ဇာအတတ်အားဖြင့်ပြည့်စုံသောဥယျာဉ်၊ အဆင့်မြင့်ဖက်ရှင်၊ အသေးစား Fortune၊ T-Rex နှင့် Witch's Brew မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိကစားသမားအားလုံးအတွက်ယခုရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်ရနိုင်သော pokies အရေအတွက်ကို ၅၄ သို့ရရှိစေသည်။
အောက်ပါ Android ကိရိယာများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည် -
ကစားသမားအသစ်များအားလုံးကို Witch's Brew တွင်ယခုပင်အစပြုနိုင်ပြီး ၃၀၀% ပြိုင်ပွဲ $ 300 + 300 အခမဲ့ SPINS ဖြင့်ရနိုင်သည်။
Witch's Brew တွင်ဒေါ်လာ ၃၀၀ + ၃၀ အထိအခမဲ့လှည့်ဖျားများအထိ ၃၀၀% အထိ
သက်တမ်းရှိသည် - Aprပြီ ၂၇ ရက် - မေလ ၃ ရက်
Playthrough: 30x (အပ်ငွေ + အပိုဆု), 10x သာ (!) လည်ပတ်မှုများ
မက်စ် cashout: န့်အသတ်
Cinco de Mayo ပြိုင်ပွဲသည်မေလ ၅ ရက်အထိဖြစ်သည်။ La Fiesta ကိုအသုံးပြုပြီးဒီပြိုင်ပွဲဟာ (၁၁) ရက်ကြာမြင့်ပြီးအကန့်အသတ်မရှိပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးပြီးပထမဆုကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးပါတယ်။
နာမည်: Cinco က de Mayo ပြိုင်ပွဲ
ဂိမ်း: La Fiesta
ရက်စွဲ - ၂၆ Aprilပြီ - မေလ ၆ ရက်
သင်၏နောက်သိုက်တွင် ၁၅၀% ပွဲအတွက်ကူပွန်ကုဒ်နံပါတ် MAYFLY ကိုသုံးပါယခုနှင့်မေလ ၁ ရက်အကြားအများဆုံးဆုကြေးဒေါ်လာ ၁၅၀ * အထိရှိသည်။ Cash Grab တွင်အခမဲ့လှည့်ဖျားမှုပေါင်း ၁၀၀ ကို PLUS!
* 1ပြီ ၂၈ မှမေလ ၁ ရက်အကြားဝယ်ယူမှု ၁ ခုအတွက်ကူပွန်သက်တမ်းရှိသည်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေဒေါ်လာ ၃၅ ဖြစ်သည်။ အများဆုံးဆုကြေးသည် $ 28 ဖြစ်သည်။ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများသက်ဆိုင်သည်
ပူပြင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက် - Slots Capital, Desert Nights
Mystic Wolf ၌ဒေါ်လာ ၇၈% + ဒေါ်လာ ၃၈၅ + ၇၇ အထိအခမဲ့အပိုဆုကြေး
* အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအမည်: MYSTICWEEKEND / သက်တမ်းရှိ: သောကြာနေ့မှတနင်္ဂနွေနေ့၊ တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်၊ အဖွင့်အပိတ်: ၃၀x (အပ်ငွေ + အပိုဆု) / ဂိမ်းများကိုခွင့်ပြုထားသော - ကစားကွက်အားလုံး၊ ခြစ်ရာကတ်များနှင့်ကင်နို / အပ်ငွေအပိုဆုကြေးအတွက်အများဆုံးငွေထုတ်ခြင်း | အခမဲ့လှည့်ဖျားအပေါ် 30x max ကိုငွေသားထွက်
TENSUNS250 - ဒေါ်လာ ၁၂၅၀ အထိ 250%
* အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအမည်: TENSUNS250 / သက်တမ်းရှိ: ၂၆ မှthပြီလ ၃၀ / Playthrough: 26x (အပ်ငွေ + အပိုဆုကြေး) / ခွင့်ပြုထားသောဂိမ်းများ - Suns ဆယ်ယောက် / အများဆုံးငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း / Min Dep: $ 30
AllIrish ကာစီနိုမှာ 145 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
30 အခမဲ့ FreeSpins ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
160 SuperLenny ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
15 အခမဲ့ယူရိုလောင်းကစားကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
သူဌေးကကာစီနိုမှာ 55 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
MrSpill ကာစီနိုမှာ 140 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
Soartan ကာစီနိုမှာ 165 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
80 Goldbet ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
Mobilbet ကာစီနိုမှာ 150 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
AllIrish ကာစီနိုမှာ 120 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
150 MrSmith ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
မာရီယာကာစီနိုမှာ 120 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
ChanceHill ကာစီနိုမှာ 70 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
WickedJackpots ကာစီနိုမှာ 160 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
165 Tipbet ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
80 အခမဲ့ Insta ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
Betbright ကာစီနိုမှာ 65 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
Suomikasino ကာစီနိုမှာ 45 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
150 အခမဲ့အမ်စတာဒမ်ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
Leovegas ကာစီနိုမှာ 125 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
Verajohn ကာစီနိုမှာ 160 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
0.1 အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ Mobile ကို Live! - Black Diamond, Spartan Slots, Box 24
0.2 'Purrfect အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ' - မကြာမီလာမည် - Slotocash, Uptown Aces, Fair Go
0.3 အသစ်သော AU ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ - စိန်အနက်ရောင်၊ သေတ္တာ ၂၄၊ ကန္တာရညများ
0.4 လကုန်အခမဲ့လှည့်ဖျား - Slotocash, Uptown Aces, Fair Go
0.5 Fair Go အသစ်ပြောင်းခြင်းများ
0.7 ပူပြင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းချက် - Slots Capital, Desert Nights